စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားအားလုံးအချိန်အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်စီးရီးခဲ့ကြသည်. အဆိုပါဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားကနေမြင်ကွင်းများအတော်များများဟာလန်ဒန်သူ့ဟာသူအတွင်းသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြ. သင်ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စာအုပ်စီးရီးတစ်ဦးသေဆုံးခဲယဉ်းပန်ကာများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, လန်ဒန်ခြောအဆိုပါဖြစ်ပါသည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင်လမ်းပေါ်တွင်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုယူရှာနေတဲ့ဘီယာကိုနှစ်သက်ကြသည်ဒါမှမဟုတ်သင်ပြီးသားစာအုပ်တွေကိုအပေါ်ဥရောပခရီးစဉ်ရှိမရှိ, takealook at the Beer Route by Train – ရထားဖြင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးဘီယာ. သငျသညျစိတျပကျြမညျမဟုတျ! ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ,…